မြန်မာစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်တစီး KIA ပစ်ခတ် — မြန်မာဌာန
မြန်မာစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်တစီး KIA ပစ်ခတ်
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က မြန်မာ အစိုးရတပ်က ရဟတ်ယာဉ်တစီးဟာ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်က ပစ်ခတ်တဲ့ကျည် ထိသွားတယ် လို့ KIO က ပြောပါတယ်။
ကျည်ထိမှန်ပြီးနောက် ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုတော့ KIO က အတည်ပြုချက် မပေးပါဘူး။ ဒီရဟတ်ယဉ်ဟာ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်၊ မိုင်ဂျာယန်မြို့အနီးက အစိုးရ စစ်စခန်းကို ဦးတည်သွားနေတာ ဖြစ်ပြီး ရိက္ခာသယ်တဲ့ယာဉ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KIA အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
“မိုင်ဂျာယန်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက်က မုပွန်ဆိုတဲ့ အစိုးရ စစ်တပ်စခန်းကို ရိက္ခာထောက် လာတာထင်ပါတယ်။ အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ကို ကျနော်တို့ဘက်က စက်ကလေးလိုမျိုး သေနတ်နဲ့ပဲ ပစ်လိုက်တယ်။ ထိတော့ ထိသွားတယ်ပေါ့၊ မီးခိုး အူပြီး ပြန်ခေါက်သွားတယ်။ ရဟတ်ယာဉ် အမျိုးအစား အသေးစိတ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ အရင်က သုံးတဲ့ Bell ရဟတ်ယာဉ်မျိုးပဲ ဖြစ်မှာပါ”
အဲ့ဒီ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗန်းမော်မြို့အနီး စိန်လုံရွာနားမှာ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က အပျက်အစီးတွေ တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ရရှိပေမယ့် KIO က အတည်ပြုချက် မပေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ကလည်း ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီး စိန်လုံရွာအနီးမှာ ပျံဝဲနေတာ တွေ့ရပြီး KIA တပ်က ပစ်ခတ်ချိန်မှာ လှည့်ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ကြားရပါတယ်။
KIO နဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုးစစ်တွေ ရပ်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အမိန့်ပေးခဲ့ပေမယ့် တိုက်ပွဲတွေ နေ့စဉ် ဆက်ဖြစ်နေပြီး တချို့နေရာတွေမှာ တရက်တည်း လေး ငါး ခြောက်ကြိမ်ထက် မနည်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
I never believe they said to the people we'll go to clean and good government. I see that it's just treat us and lie softly.
ရဟတ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ရရွားထုတ္ MI-17 ျဖစ္ပါသည္။
စစ္သားက သန္းဂဏန္းေလာက္ပဲရွိတာပါ မၾကာခင္ကုန္ေတာ ့မွာပါ
မရပ္လဲဘာျဖစ္လဲ ဆက္တုိက္ ကုန္သြားေအာင္တိုက္ ေနာက္က်ရင္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တေယာက္ပဲက်န္ေတာ့မွာ
ဘာမွ ေျပာမေနနဲ ့ဆက္တိုက္ ကုန္သြားေအာင္တုိက္ က်ေနာ္
သူတို ့ကို အျမင္ကတ္တယ္... အဓိက ကေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေဆြးေႏြးတယ္ဆိုပီး ႀကံ ့ဖြံ ့ပါတီအတြက္
နဲ ့ကုိယ့္စီးပြါးေရးအတြက္ ေ၀စုခြဲေနတဲ ့ကိုေအာင္ေသာင္းကို ဒီ
တစ္ခါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြၾကရင္ အပီးသာရွင္းပစ္လိုက္ေတာ ့.........
God Bless KIA
MAY GOD"S BLESS YOU KIA...
GARAI HTA AKYU HPYI YA NGA AI...